Waan ka Raysanay Wareegii Dheeraa iyo Dhibaatooyinkii Yaxaaska - Cakaara News
Waan ka Raysanay Wareegii Dheeraa iyo Dhibaatooyinkii Yaxaaska
Jigjiga(CN) Axad, 6dii Septmber 2015, Shacabka kunool Gobolka Nogob oo dhibaatooyin ba'ani kahaysan jireen dhanka isugudubka bulshada iyo gaadiidka balse maanta ay udhamaystirmeen dhamaan baahida aas-aasiga ah ayaa kunaaloonaya farxad ah inay karaysteen wareegii dheeraa iyo dhibabkii yaxaasku kuhayay bulshada.
Gudoomiyaha Gobolka Nogob mudane Cabdi Cali Mataan oo kawarbixiyay xaalada gobolka ayaa si durugsan uga faalooday guulaha horumarineed ee 5tii sano ee ugu danbaysay laga soo hoyiyay mashaariicihii horumarineed ee guud ahaanba gobolka. Wuxuuna sheegay gudoomiyuhu in degmooyinka gobolka nogob ay kala xidhnaan jireen wixii kahoreeyay 5sano degmana degmo ugudbi jirin sababta oo ah waxaa gobolka dib riday dhibaatooyinkii UBBO iyo xukuumadihii liitay balse maanta isu-socodka gobolku yahay mid toos ah iskadaa degmee qabalee ilaa qabalee hoosaad. Tanina waa qorshe kamid ah qorshayaasha ay xukuumadu qaadatay ee kajawaabida deg-dega ah ee baahida shacabka mudo yar gudahoodna lagaga midho dhaliyay.
Waxaa kale oo uu gudoomiyuhu sheegay mashaariicaha waa wayn ee 5tii sano laga hirgaliyay gobolka iyo kuwa socda labadaba. Waxaana kamid ah: jidadka Fiiq ilaa Qubi oo la isu furay, wadada Fiiq iyo Sagag iskuxidha oo la furay, 19 health center iyo Hospitalka wayn ee fiiq, Wadada Fiiq iyo Mayu oo lagabagabeeyay, Wadada isku-xidha Xamaro, Lagahida iyo Salaxaad oo wabiga shabeele kala xidhay oo abid taariikhda markii 1,aad lagagudbay-Waangay, Laydh 24 saac ah oo fiiq lagaliyay, khadkii mobilada nooca 3G ah oo toos uga shaqeya gobolka intiisa kale marka laga reebo lagahida iyo salaxaad oo lawado, Dhuxun iyo Sagag oo la isu furay, Dhuxun ilaa gasaangas oo si kumeel gaadh ah loo qardeeyay caadina loo maro, dugsiyada sare ee fiiq, Dugsiga hoyga agoonta ee laga dhisay fiiq, dugsiga sare ee sagag, Garbo iyo salaxaad oo lawado, biyo-galinta fiiq-xamaro-gasaangas oo xadhig kajarkii uhadhay,27 animal health post iyo labo animal mobile health team.
Sidaadarteed shacabka kunool gobolka ayaa cadeeyay in ay si dhibyar isugu gooshaan kana raysteen masaafadii dheerayd ee ay wakhtiga dheer u soo socon jireen haddii ay ubaahdaan degmooyinka kale taas oo ay u dheerayd yaxaas dhibaatayn jiray dadka iyo duunyada ka talaabaya ama kacabaya wabiga.
Gudoomiyaha ayaana ugu danbayn carabka ku adkeeyay inay xukuumadu gobolka galisay dadaal dheeri ah maadaama uu aad uga danbeeyay gobolada kale ee deegaanka. Maantana uu dhanka tartanka gobolada ugu horeeyo. Shacabka gobolkuna kaalin laxaadleh kaqaatay horumarkan taabagalay.